Ukuhlola ubuchwepheshe - Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
Nsuku zonke, i-RUMOTEK isebenza ngokuzinikela nomthwalo wokuqinisekisa umkhiqizo osezingeni eliphakeme.
Odonsa abasebenza unomphela basetshenziswa cishe kuyo yonke imikhakha yezimboni. Amakhasimende ethu avela ezimbonini ze-robotics, ezemithi, ezezimoto nezasemkhathini zinezidingo eziqinile ezingafinyelelwa kuphela ngezinga eliphakeme lokulawulwa kwekhwalithi. Kufanele sihlinzekele izingxenye zokuphepha, ezidinga ukuhambisana nenqubo nemibandela eqinile. Ikhwalithi enhle ingumphumela wokuhlelwa okunemininingwane nokuqaliswa okuqondile. Sisebenzise uhlelo lwekhwalithi ngokuya ngemikhombandlela ye-standard standard ye-EN ISO 9001: 2008.
Ukulawulwa ngokuqinile kwezinto zokusetshenziswa, abahlinzeki abakhethwe ngokucophelela ngekhwalithi yabo, nokuhlolwa okubanzi kwamakhemikhali, okwenziwe ngokomzimba nangokobuchwepheshe kuqinisekisa ukuthi kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme. Ukulawulwa kwenqubo yezibalo nokuhlola izinto kwenziwa kusetshenziswa isoftware yakamuva. Ukuhlolwa kwemikhiqizo yethu ephumayo kwenziwa ngokuya nge-DIN ejwayelekile 40 080.
Sinabasebenzi abaqeqeshiwe kakhulu kanye nomnyango okhethekile we-R & D okuthi, ngenxa yemishini yokuqapha nokuhlola, ungathola ulwazi olubanzi, izici, amajika kanye namagugu kazibuthe wemikhiqizo yethu.
Ukukusiza ukuthi uthole ukuqonda okungcono kwamagama asemkhakheni, kulesi sigaba sikunikeza imininingwane ehambelana nezinto ezihlukile zamagnetic, ukwahluka kwejometri, ukubekezelelana, amandla okunamathela, ukuma kanye namandla kazibuthe, kanye nesichazamazwi sobuchwepheshe amatemu nezincazelo.
I-laser granulometer ihlinzeka ngosayizi wokusabalalisa okusanhlamvu oqondile wezinhlayiya ezibonakalayo, njengezinto zokusetshenziswa, imizimba nama-glazes e-ceramic. Isilinganiso ngasinye sithatha imizuzwana embalwa futhi sembula zonke izinhlayiya ngosayizi webanga ophakathi kuka-0.1 no-1000 micron.
Ukukhanya kuyigagasi elisebenza ngogesi. Lapho ukukhanya kuhlangana nezinhlayiya ezisendleleni yokuhamba, ukuxhumana phakathi kokukhanya nezinhlayiya kuzoholela ekuphambukeni kwengxenye yokukhanya, okubizwa ngokuthi ukusabalalisa ukukhanya. I-angle ehlakazekayo iba nkulu, usayizi wezinhlayiyana uzoba mncane, incane i-angle ehlakazekayo, ubukhulu bezinhlayiyana buzoba bukhulu. Izinsimbi zomhlaziyi wezinhlayiya zizohlaziya ukusatshalaliswa kwezinhlayiyana ngokuya ngalesi sici somzimba segagasi elikhanyayo.
HELMHOLTZ COIL HLOLA IBR, HC, (BH) MAX & ORIENTATION ANGLE
Ikhoyili ye-Helmholtz iqukethe amakhoyili amabili, ngalinye linenombolo eyaziwayo yokujika, ebekwe ebangeni elinqunyiwe ukusuka kukazibuthe ovivinywayo. Lapho uzibuthe waphakade wevolumu eyaziwayo ufakwa enkabeni yawo womabili amakhoyili, ukugeleza kukazibuthe kukazibuthe kukhiqiza i-current kumakhoyili angaxhunyaniswa nesilinganiso sokugeleza (i-Maxwells) ngokuya ngokufuduka kanye nenani lamajika. Ngokulinganisa ukufuduka okubangelwa uzibuthe, ivolumu kamazibuthe, i-coefficient ye-permeance, nokutholakala kwamandla kukazibuthe, singanquma amanani afana ne-Br, Hc, (BH) max nama-engeli wokuma.
I-FLUX DENSITY INSTRUMENT
Inani le-flux kazibuthe edlula endaweni yunithi ethathwe ngokungafani nesiqondiso sokuhamba ngamandla kazibuthe. Ebizwa nangokuthi i-Magnetic Induction.
Isilinganiso samandla wensimu kazibuthe endaweni ethile, evezwe ngamandla ebude beyunithi ngayinye kumqhubi ophethe iyunithi yamanje ngaleso sikhathi.
Ithuluzi lisebenzisa i-gaussmeter ukukala ukuminyana kwe-magnet unomphela ebangeni elinqunyiwe. Imvamisa, isilinganiso senziwa kuphakathi kukazibuthe, noma ebangeni okuzosetshenziswa ngalo ukugeleza komjikelezo kazibuthe. Ukuhlolwa kobuningi be-Flux kuqinisekisa ukuthi okokusebenza kukazibuthe okusetshenziselwe odonsa bethu abangokwezifiso kuzokwenza njengoba kubikezelwe lapho isilinganiso silingana namanani abaliwe.
I-DEMAGNETIZATION CURVE TESTER
Isilinganiso esizenzakalelayo sejika le-demagnetization lempahla kazibuthe unomphela efana ne-ferrite, i-AlNiCo, i-NdFeB, i-SmCo, njll. Isilinganiso esinembile samapharamitha wesici sikazibuthe we-remanence Br, amandla okuphoqelela i-HcB, amandla okuphoqelela wangaphakathi we-HcJ kanye nomkhiqizo wamandla kazibuthe omkhulu (BH) max .
Hlakulela isakhiwo se-ATS, abasebenzisi bangenza ngezifiso ukumiswa okuhlukile njengoba kudingeka: Ngokuya ngangaphakathi nosayizi wesampuli elinganisiwe ukunquma usayizi we-electromagnetic namandla okuhlola ahambisanayo; Khetha ikhoyili yokulinganisa ehlukile uphenye ngokuya ngenketho yendlela yokulinganisa. Nquma ukuthi ukhetha ukukhetha ngokuya ngesampula.
I-TESTER YOKUPHILA EPHAKAMILEYO (HAST)
Izici eziyinhloko ze-HAST neodymium uzibuthe ikhulisa ukumelana ne-oxidation nokugqwala nokunciphisa ukwehla kwesisindo ekuhlolweni nasekusebenziseni.I-USA Standard: PCT at 121ºC ± 1ºC, 95% humidity, 2 pressure atmospheric for 96 hours, weight weight <5- I-10mg / cm2 yaseYurophu ejwayelekile: I-PCT ngo-130 ºC ± 2ºC, umswakama ongu-95%, ingcindezi yomkhathi emithathu yamahora ayi-168, ukwehla kwesisindo <2-5mg / cm2.
Isiqubulo esithi "HAST" sisho ukuthi "Ukuhlolwa Kokushisa Okusheshayo Okusheshisiwe / Umswakama." Isiqubulo esithi “THB” sisho ukuthi “Ukhetho Lomswakama Wokushisa.” Ukuhlolwa kwe-THB kuthatha amahora ayi-1000 ukuqeda, kanti imiphumela ye-HAST Testing itholakala kungakapheli amahora angama-96-100. Kwezinye izimo, imiphumela itholakala ngisho nangaphansi kwamahora angama-96. Ngenxa yenzuzo yokonga isikhathi, ukuthandwa kwe-HAST kuye kwanda ngokuqhubekayo eminyakeni yamuva. Izinkampani eziningi sezisuse ngokuphelele i-THB Test Chambers nge-HAST Chambers.
Ukuskena ama-microscopic kagesi
I-scanning electron microscope (SEM) uhlobo lwe-microscope ye-electron ekhiqiza izithombe zesampula ngokuyithwebula ngogongolo olugxile lwama-electron. Ama-electron ahlangana nama-athomu kusampula, akhiqiza amasiginali ahlukahlukene aqukethe imininingwane mayelana nokwakheka kwesampula nokwakheka komhlaba.
Imodi ye-SEM ejwayelekile kunazo zonke ukuthola ama-electron wesibili akhishwa ngama-athomu ajabule ngogongolo lwe-electron. Inani lama-electron wesibili angatholakala lincike, phakathi kwezinye izinto, kwisimo sendawo yesibonelo. Ngokuthwebula isampula nokuqoqa ama-electron wesibili akhishwa kusetshenziswa umtshina okhethekile, isithombe esiveza isimo sendawo sakhiwe.
UKUGQOKA UBUDODEKI BOKUGQOKA
I-Ux-720-XRF iyi-high-end fluorescent X-ray coating gaugeji gauge efakwe i-polycapillary X-ray yokugxila kokukhanya kanye nomtshina we-silicon drift. Ukusebenza kahle kokutholwa kwe-X-ray kunika amandla ukukala okuphezulu nokunemba okuphezulu. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka okusha ukuthola indawo ebanzi ezungeze indawo yesampula kunikeza ukusebenza okuhle.
Ikhamera yokubuka isampula enesinqumo esiphakeme ene-zoom ephelele yedijithali inikeza isithombe esicacile sesampula enamashumi ama-micrometer ububanzi endaweni efunwayo yokubuka. Iyunithi yokukhanyisa isampula yokubuka isebenzisa i-LED enesikhathi eside kakhulu sokuphila.
ISITOLO SEBHODI LOKUTSHAYELA SALT
Kubhekiswa ebusweni bamazibuthe ukuhlola ukumelana nokugqwala kwemishini yokuhlola imvelo sebenzisa ukuhlolwa kwesifutho kasawoti okwenziwe izimo zenkungu zokufakelwa. Ngokuvamile sebenzisa isisombululo esingu-5% esiqukethe isixazululo sikasawoti se-sodium chloride ebangeni lokulungiswa kwenani le-PH elingathathi hlangothi (6-7) njengesisombululo sesifutho. Izinga lokushisa lokuhlolwa lithathwe ngama-35 ° C. Isimo sokumboza kokugqwala komkhiqizo sithatha isikhathi ukukala.
Ukuhlolwa kukasawoti kufakwa isivivinyo sokugqwala esisheshayo esikhiqiza ukuhlaselwa okulimazayo kumasampuli agqokiwe ukuze kuhlolwe (ikakhulukazi ngokuqhathanisa) ukufaneleka kwengubo yokusetshenziswa njengokuqeda ukuvikela. Ukubukeka kwemikhiqizo yokugqwala (ukugqwala noma amanye ama-oxide) kuhlolwe ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe sesikhathi. Isikhathi sokuhlola sincike ekumelweni kokugqwala kwengubo.